Ibhishi laseBiarritz | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | 20/07/2021 17:00 | Kubuyekezwe ku- 21/07/2021 15:40 | EFrance, Amabhishi
Elinye lamabhishi adume kakhulu futhi akhangayo e- EFrance yiyona Ibhishi laseBiarritz, e-Atlantic, amakhilomitha angama-32 ukusuka emngceleni neSpain. Impela uyamazi futhi uma uhlala eSpain kungenzeka ukuthi uye eholidini.
Kulungile ibhishi lokunethezekaUlwandle luhle, kepha alugcini nje ngolwandle nesihlabathi, ngoba ngokuhamba kwesikhathi indawo esikuyo izuze ukubaluleka futhi namuhla ulwandle nedolobha kwakha indawo yabavakashi engenakuqhathaniswa.
2 Ibhishi laseBiarritz
3 Yini enye okufanele uyenze eBiarritz
Kuyidolobha eliseBay of Bizcaya, ogwini lwe-Atlantic endaweni yasePyrenees, eningizimu-ntshonalanga yeFrance. Iqale ukukhula ngeNkathi Ephakathi, ngokwengxenye isuka esandleni somsebenzi we-whaling, yingakho lesi silwane esincelisayo sivela ezingubeni zaso.
Biarritz Kwakuyidolobha lasechwebeni le-whaling kusukela ngekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMXKodwa ikhulu leminyaka elilandelayo laqala ukukhuluma ngezici zokuphulukisa komoya wasolwandle futhi inhlanhla yomuzi yashintsha unomphela.
Ngesikhathi XIX leminyaka ukuqala kwezokuvakasha kokuqala, behambisana nesigaba sezimboni esasanda kuvela sezimboni nezicukuthwane, futhi iningi labo lafika lapha lifuna ukwelapha izifo zabo. Abanye bathi udumo lwanikezwa ngokuqinisekile nguVictor Hugo cishe ngonyaka we-1843, ngokuluqamba komunye wemisebenzi yakhe.
UBiarritz wabe eseqala ukutshala imali ekubukekeni kwayo futhi kwatshalwa izimbali nezihlahla ezintabeni zayo ezinesihlabathi, ukwakhiwa okuvikelwe ngezitebhisi kanye nezinsika kwashiywa kwathi maphakathi nekhulu le-XNUMX UKumkanikazi u-Eugenie, unkosikazi kaNapoleon III, wazakhela isigodlo sakhe, evula iminyango yokuvakasha kwabasebukhosini baseYurophu. Kwabe sekufika ikhasino kanye nabantu baseMelika abacebile, kepha lokho kuzoba ngekhulu lama-XNUMX.
Kulezi zinsuku, ezokuvakasha zempilo evame ukujoyinwa ezokuvakasha ezisebenza kakhulu, ezemidlalo, ngakho-ke iBiarritz ithandwa kakhulu. Ibhishi lingamakhilomitha ayisithupha ubude futhi-ke kungakhulunywa ngakho amabhishi ayisikhombisa, angaphezu kwelilodwa nje.
Empeleni, kufanele sikhulume nge- IPlaya Grande de Biarritz, enamamitha angama-450 kwesihlabathi futhi kuhle ukuntweza. Ku-boardwalk ehamba ubude basolwandle kunezindawo zokudlela zezinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle, idamu lokubhukuda, amakhasino nama-spas. Eqinisweni baningi izikhungo ze-spa ezinikeza ukwelashwa ngodaka, amanzi olwandle nokuningi.
Lolu bhishi lwaziwa nangokuthi i-Empress Beach ngoba u-Empress Eugenia wakha isigodlo sakhe khona lapha, wagcina eseba yihhotela, i Ihhotela de Palais. Lapha kulapho izikhathi kamuva ukuntweza olwandle kwazalelwa eYurophu.
Kwakungu-1956 lapho umbhali wesikrini uPeter Viertel eza ezoqopha i-movie yakhe Ilanga nalo liyaphuma, ngokususelwa kunoveli edumile kaHemminway. Umkhiqizi uZanuck weza naye futhi lapho kwaqala khona konke ngoba uZanuck wayengumthandi wokuntweza olwandle.
Ngemuva konyaka, nabangane bakhe, wasungula i- iklabhu yokuqala ye-surf yaseYurophu, Waikiki Surf Club. Futhi kusukela lapho lolu lolwandle kanye nogu lwaseBasque bekulokhu kuyizindawo zemidlalo eminingi yokuntweza olwandle kanye nemincintiswano. Ngokusobala, nanamuhla kunezikole ze-surf uma kwenzeka ungazi futhi ufuna ukuqala.
ILa Milady ngolunye ulwandle, olukhulu, oludume kakhulu phakathi kwabantu abasha nabendawo. Ungahamba ngendledlana yayo yebhodi futhi ujabulele ukubukwa, kuhle, futhi futhi kunendawo enikezelwe ezinganeni. Futhi lolu lolwandle isetshenziselwe abantu abakhubazekile ezimotweni. Vele, lapho kunamagagasi aphezulu kuyingozi enkulu. Ukupaka kumahhala, kunezikole zama-surf nezindawo zokudlela ezinhle.
ICôte des Basques is surfer kakhulu futhi usebenzise izici zayo (izungezwe amawa futhi ungabona ugu lwaseSpain nezintaba zalo). Emanzini amakhulu ukubhukuda akuvunyelwe futhi cishe alikho nolwandle. Ungamisa imoto yakho phezulu eweni bese usuka lapho wehle ngezinyawo noma ngebhasi yamahhala, ngesizini yehlobo. Ngalesi sikhathi kukhona nokuphepha kuze kube ngu-6, 7:30 ntambama.
IPort Vieux ibhishi elincane futhi elinokuthula esesigodini samatshe esivikelwe emimoyeni nasemagagasini. Kusondele enkabeni yedolobha futhi yingakho ilungele imindeni enezingane. Amanzi ngokuvamile azolile futhi akulungele ukubhukuda. Itholakala ngeCanon Rock neBoucalot Rock, yize kungokugcina lapho ungadlula khona ngezikebhe nama-jet skis. Awukwazi ukudoba ngaphansi kwamanzi ngaphezu kwamamitha ayi-150 ukusuka ogwini.
Emgwaqweni kunendawo yokupaka mahhala ebusika, ekhokhelwa ehlobo. Eduze nendawo yokupaka engaphansi komhlaba, nayo. Kukhona ikhumbi yamahhala evela enkabeni okukushiya lapha, ugijima phakathi kuka-10 ekuseni no-7 ntambama, izitolo zekhofi, amakilabhu ama-dive namakilabhu amathathu okubhukuda. Kepha qaphela, kuyibhishi lapho Ukubhema akuvumelekile: I-Plage sans tabac.
IMiramar Beach idumile kubahlali ngoba ulwandle oluthandekayo noluthule. Iningi labantu liza ukuvakasha, yize ungahamba futhi ngokuntweza phezu kwamagagasi nokugibela amabhodi Eduze kunendawo yokupaka engaphansi komhlaba, uma kwenzeka kufika imoto.
IMarbella Kungolunye lolwandle oluhle, i- ukunwetshwa kweCôte des Basque. Kuyaziswa kakhulu phakathi kwama-surfers, yize abantu abanokukhubazeka kwezimoto bekuthola kunzima ngoba kunamadwala nezitebhisi. Ungafika lapho ngebhasi, kunokuvikeleka ehlobo, kunezikole ze-surf nezitolo zokuqasha imishini kanye nendawo yokudlela / yokudlela.
Yini enye okufanele uyenze eBiarritz
Ngaphandle kwamabhishi, umuntu angenza okuningi. Isibonelo, uma sihamba nezingane ngaphezu kwamahhotela anemisebenzi yazo, kukhona IMaritime Museum ngezinhlobo ezingaphezu kwezingu-150 zasolwandle abazaziyo, kuzo I-Aquarium.
EBiarritz kunengcebo yokwakha efaka i- ISonto LaseSt.Martin kusukela ngekhulu le-XNUMX noma iSonto Lobu-Orthodox LaseRussia. a hamba eceleni kwebhodi lokuhamba Kuyadingeka, ukubona iHôtel du Palais enhle, isigodlo sangaphambili, noma ubuhle Faka uSte Eugenie.
Ungathatha futhi ukuhamba nge-gastronomic ngeMakethe yaseHalle noma Imakethe yaseLes Halles, ukuzama konke noma ukuthenga imikhiqizo yesifunda: ushizi, okujwayelekile piperade, Uju lwaseMontagne ... Kuyindawo enhle futhi zama izinhlanzi nezinhlanzi zasolwandle enama-chips, kunoma iziphi izindawo zokudlela zayo, yize eziningi zazo zibiza, noma i-skewer noma pintxo, eRue des Halles ematasa.
Futhi ukubukwa okuhle kakhulu Banikezwa yi-boardwalk, indlu yesibani nethala layo, lapho ungahamba khona kamuva uye eCôte des Basques, noma endaweni yokudlela Ukumhlola ukunikela, ngokushona kwelanga ngakunye, indawo enhle yokujabulela ikhadi leposi elinezingilazi zewayini laseFrance esandleni.
Uma kuziwa ekwenzeni ukuvakasha okuncane, unga vakashela izindawo zokungcebeleka eziseduze zaseSaint Jean De Luz naseCibourne, enezakhiwo ezinhle, itheku lokudoba, umfula nemibala eminingi. Ukwakheka okujwayelekile kweBasque kweCibourne kuyathandeka futhi kungashiwo okufanayo nolwandle iSaint Jean De Luz, uma ufuna ukuphunyuka kwezokuvakasha kwe-mega kweBiarritz.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » EFrance » Ibhishi laseBiarritz
Imvunulo yendabuko yaseRussia